မြန်မာနိုင်ငံ ရွှေ.ပြောင်းအလုပ်သမားများ၏အခွင့်အရေးအတွက် လူ.အခွင့်အရေးအဖွဲ.များကတိုက်ပွဲဝင် | Ethnic Nationalities' Voice: Struggling Voices for Justice
တိုင်းရင်းသားအသံ တရားမျှတမှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်အသံများ	မြန်မာနိုင်ငံ ရွှေ.ပြောင်းအလုပ်သမားများ၏အခွင့်အရေးအတွက် လူ.အခွင့်အရေးအဖွဲ.များကတိုက်ပွဲဝင်	June 15, 2008
မြန်မာနိုင်ငံမှ တရားမဝင်ရွှေ.ပြောင်းအလုပ်သမားအား ပိုပြီးအကာအကွယ်ပေးဖို. လူ.အခွင့်အရေးအဖွဲ.များက ထိုင်အစိုးရအပေါ် ဖိအားပေးတိုက်ပွဲဝင်နေကြပါသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံရှိ နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားများ၏ ၇၅ ရာခိုင်းနှုန်းလောက်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံသားများဖြစ်ပြီး စိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဘေးကြောင့် ထိုဂဏန်းထက်ထပ်များလာနိုင်မယ် လို. လူ.အခွင့်အရေးအဖွဲ.များက ပြောပါသည်။
အလုပ်သမားများ၏ ခေါင်းပုံဖြတ်စားခံရမှုကိုအသိအမှတ်ပြုထားပြီး လူကုန်ကူးမှုကို ဆန်.ကျင်ထားသောဥပဒေအသစ်တစ်ရပ်ကို ထိုင်းအစိုးရက ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ထုတ်ပြန်လိုက်ပါသည်။
သို.သော်လည်းဘဲ၊ တိုက်ပွဲဝင်သူများအနေနဲ. ၎င်း ဥပဒေအသစ်ဟာ ရွှေ.ပြောင်းအလုပ်သမားများ၏အခြေခံအခွင့်အရေးများအတွက် လုံလောက်မှုမရှိမှာကို စိုးရိမ်ကြပြီး ဒီထက် လုပ်စရာအများကြီးရှိနေသေးတယ် လို.ပြောပါသည်။
အလုပ်သမားများသည် အလုပ်အမျိုးပေါင်းစုံလုပ်ကြပြီး ဘန်ကောက်ဆိပ်ကမ်းမှာ ငါး ထည့် ငါးရွေးအလုပ်များလည်း ပါဝင်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ အခြားအလုပ်သမားများနည်းတူ လှေဆင်းငါးဖမ်းအလုပ်သမားများကလည်း အလုပ်သမားအခွင့်အရေးမရှိ၊ အကာအကွယ်မရှိ၊ ကန်ထရိုက်မရှိတဲ့အခြေအနေအောက်မှာအလုပ် လုပ်နေကြရပါသည်။
သူတို.အားလုံးဟာ တလကိုဘတ်ငွေ ၆၀၀၀ ပေးမယ် လို.အလုပ်ရှင်တွေက နှုတ်ဖြင့်သဘောတူထားပါသည်၊
ကျနော်တို.ငါးများ သယ်ချနေသည့်အချိန်မှာ လှေပိုင်းရှင်တွေက ကျနော်တို.ကို ဟောက်တယ်၊ ဖိနှိပ်တယ်၊ အဲဒီလိုမျိုး အလုပ် လုပ်နေရတာဆိုတော့ ခက်တာပေါ့.. လို. AJAZEERA သတင်းဌာနအား ကိုမျိုးချစ်ကပြောပြပါသည်။
အလုပ်သမားအခွင့်အရေးအဖွဲ.များ၏လေ့လာချက်အရ၊ လှေဆင်းငါးဖမ်းအလုပ်သားများသည် တစ်နေ.ကို ၁၂ နှစ်ရီကျော်၊ တစ်ပတ်ကို ၇ ရက်လုံးလုံးအလုပ်လုပ်နေရတယ် လို. ပြောပါသည်။
ထိုင်းငါးထုတ်စက်ရုံအတွက် တစ်နှစ်ကို ဒေါ်လာ ဘီလီယံနဲ.ချီ ဝင်ငွေရရှိနေပေမဲ့ လှေဆင်းငါးဖမ်းအလုပ်သားများအတွက် လခမှန်မှန်မရရှိကြပါ။
သို.သော်ငြားလည်း၊ ငါးဖမ်းအလုပ်သားများသည် မြန်မာပြည်ကိုပြန်သွားရပြီး စစ်အာဏာရှင်အောက်မှာနေရမှာကို စိုးရိမ်ကြောက်ကြပြီး လခအနိမ်.စားနဲ. အဆင်ပြေအောင် အလုပ်လုပ်နေရတယ် လို. သူတို.ပြောပြပါသည်။
အများထင်မြင်ချက်အရ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ နေထိုင်ရသည့် ဘဝဟာ နည်းနည်းအဆင်ပြေတယ် လို.ပြောပါသည်။ သူတို.အများစုဟာ ဘာမှသက်သေအထောက်အထားမရှိဘဲ လူမှောင်ခိုးပွဲစာများမှတစ်ဆင့် ရောက်ရှိလာကြပါသည်။
ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ. သူတို.ကို တရားမဝင်ရွှေ.ပြောင်းလာသူများအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အလုပ်ရှင်တစ်ချို.ကတော့ သူတို.ကို ခေါင်းပုံဖြတ်စားဖို.စဉ်စားပါသည်။
သူတို.တတွေဟာ အလုပ်ရုံအထဲမှာဘဲနေခိုင်းပြီး အပြင်ထွင်ခွင့်မပြုထားပါဘူး၊ မိန်ကလေးငယ်များအတွက်ကျတော့၊ သူတို.၏သူဌေးများက အကြပ်ကိုင်ပြီး လိင်ဆက်ဆံမှု ခံရတာလဲရှိတယ် လို. အလုပ်သမားအခွင့်အရေးတိုက်ပွဲဝင်နေသူ Junya Lek Yimprasert ကပြောပါသည်။
အလုပ်သမားများက အကယ်၍ အလုပ်ထဲမှာ ဒဏ်ရာထိခိုက်ရရှိမှု၊ သို.မဟုတ် အလုပ်ပြုတ်ခံရမှု ဖြစ်သွားရင်လဲ ဥပဒေအရ တိုင်းကြားခွင့်မရှိပါ။ မသစ်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က အလုပ်မှာ မတော်တဆလက်တစ်ဖက်ပြတ်သွားပြီး လျောကြေးငွေပြန်ရဖို. အတွက်မျော်လင့်ချက်အနည်းငယ်သာထားနိုင်တယ် လို. ပြေပါသည်။
မသစ်ဟာ သူမဘဝကောင်းစားရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံမှ ထွက်လာပြီး မာခ်ျလပိုင်မှာ သူမအလုပ်လုပ်တဲ့အလုပ်ရုံမှာ မတော်တဆလက်တစ်ဖက်ပြတ်သွားပါသည်။
ကျမ လက်တစ်ဖက်နဲ.ဆို အလုပ် လုပ်လို.မရပါဘူး၊ မြန်မာပြည်ကိုပြန်ဖို. ကျမ၏ယောက်ျားက ပြောပါသည်၊ ဒါပေမဲ့၊သူဌေးက လျောကြေးငွေမပေးလို. မြန်မာပြည်ကိုပြန်ဖို. ကျမ မတတ်နိုင်ပါဘူး၊ လို. မသစ် က အဇျာဇီရာသတင်းဌာနအားပြောပြပါသည်။
သူမလျောကြေးငွေပြန်ရဖို. Thai Labour Rights Protection Network လို.ခေါ်တဲ့ ထိုင်းအလုပ်သမားကာကွယ်ရေးကွန်ယက်အဖွဲ. က တိုက်ပွဲဝင်ပေးနေပါသည်၊ဒါပေမဲ့၊ သူမက တရားမဝင်နေထိုင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တာမို. သူမ၏သူဌေးက တစ်စုံတစ်ရာပေးဖို. မလိုက်နာပါဘူး။
မြန်မာနိုင်ငံမှ အလုပ်သမားများအတွက် အခြခံအခွင့်အရးများရရှိဖို. ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ.ကြိုးပမ်းနေပါတယ် လို.ပြောပါသည်။ လူမှောင်ခိုးတင်သွင်းမှုကို ဆန်.ကျင်ထားပြီး အလုပ်သမားတွေအပေါ် မတရားပြုမူဆက်ဆံခံရမှုကို အသိအမှတ်ပြုထားသော ဥပဒေအသစ်တစ်ရပ်ကိုထုတ်ပြန်ထားပါသည်။
သက်သေအထောက်အထားမရှိသော အလုပ်သမားများကို လိုက်လံရှာဖွေပြီး မှတ်ပုံတင်လုပ်ပေးဖို. အလုပ်သမားဝန်းကြီးဌာနကို ကျနော်တို.ပြောထားပါတယ်..လို. ထိုင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး၊ နပ်ဖဒွန်ပထမ ကပြောပါသည်။
ထိုင်းအလုပ်သမားများကို အကာအကွယ်ပေးတဲ့နည်းတူ မြန်မာအလုပ်သမားများကိုလည်း ကျ နော်တို.အကာအကွယ်ပေးရမှာပါဘဲ.. လို.သူကဆက်ပြောပါသည်။
လူအခွင့်အရေးအဖွဲ.များသည် ထိုင်းရဲများ၏ မကြာခဏလာဘ်စားမှုများကြောင့် ဥပဒေ မလိုက်နာမှာကို စိုးရိမ်ကြပါသည်။
ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းတိုက်ခိုက်ပြီးနောက်ပိုင်း လူတွေအများအပြာ ထွက်ပြေးလာတာကြောင့် ထိုင်းအလုပ်ရှင်အများစုက ခေါင်းပုံဖြတ်စားဖို.အဆင်သင့်ဖြစ်နေကြပါသည်။
Illegal immigrants from Myanmar account for three-quarters of Thailand’s foreign workers [Al Jazeera
Thit lost her arm in an accident but has littlehope of getting compensation [Al Jazeera]
For many though, life in Thailand is little better; many arrive via sophisticated human trafficking cartels without any documentation.